Docker: DEBIAN 10 တွင်နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
Docker: DEBIAN 10 တွင်နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
La Operating Systems နှင့် Applications ကိုသို့မဟုတ်စနစ်များ၏ virtualization အခြေခံအားဖြင့်အတူတူမှာဝေမျှနိုင်ဖြစ်ခြင်းပါဝင်သည် hardwareဤအရာများစွာဒြပ်စင်လုံးဝလွတ်လပ်စွာ operating ။
က virtualizing မှကြွလာသောအခါ လည်ပတ်မှုစနစ်များ နှင့် အခမဲ့၊ အခမဲ့နှင့် / သို့မဟုတ်ပွင့်လင်းသောနည်းပညာများ, နည်းပညာများသို့မဟုတ် application များကဲ့သို့မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည် Promox, Xen, VirtualBox, QEMU သို့မဟုတ် KVM။ ဒါပေမယ့်လာရင် Applications ကိုသို့မဟုတ်စနစ်များ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည် Kubernetes သို့မဟုတ် Docker.
ဤရွေ့ကားနောက်ဆုံး2ဖြစ်ကြသည် container-based virtualization နည်းပညာ။ ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် Dockerကအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 2013 တစ်နှစ်တစ် ဦး ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုခေါ် Docker အင်ဂျင်။ ဒါကလက်ရှိခေတ်၏တိုးတက်မှုများ၊ ဆိုလိုသည်မှာကွန်တိန်နာများနှင့်ပတ်သက်သည့်အယူအဆများနှင့်ဗဟုသုတတို့ကိုရရှိခဲ့သည် လည်ပတ်မှုစနစ်များ အခမဲ့နှင့် / သို့မဟုတ်ပွင့်လင်း (Unix / Linux)ထိုသို့သောအဖြစ် cgroups နှင့် namespacesဒီတိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာနယ်ပယ်မှာတိုးတက်ဖို့ပါ။
အရင်ကအဖြစ်အပျက်တွေမှာငါတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ Dockerထို့ကြောင့်၎င်းသည်မည်သည့်အရာ၊ သို့မဟုတ်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ သို့မဟုတ်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များသို့မဟုတ်ဒြပ်စင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းလေ့လာခြင်းမပြုရပေ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတကယ် installing အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် လက်ရှိမူကွဲ (19.03.8) အပေါ် DEBIAN 10 (Buster) y GNU / Linux Distros၊ အလားတူသို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောအပေါ်အခြေခံပြီး MX Linux ကို 19.
Raspberry pi ဖြင့် Raspberry pi တွင် Docker ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Docker Container 18.09 ၏ဗားရှင်းသစ်သည်တိုးတက်မှုအသစ်များဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်
Dry: Docker ကွန်တိန်နာများအတွက်ဆက်သွယ်မှုရှိသော CLI မန်နေဂျာဖြစ်သည်
Docker ကို Linux Mint 18 Sarah တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
2 Docker: DEBIAN 10 (Buster) တွင်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
2.1 က။ အဆင့် ၁
2.2 ခ။ အဆင့် ၂
2.3 C. အဆင့် ၃
2.4 Step အဆင့် ၄
2.5 E. အဆင့် ၅
2.6 အက်ဖ်အဆင့် ၆
2.7 G. အဆင့် ၇
2.8 H. အဆင့် ၈
ဒီ၏ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမစတင်မီ container-based virtualization နည်းပညာ၊ နောက်မှမည်သည့် application သို့မဟုတ် system ကိုမဆို install လုပ်နိုင်ရန် "ကွန်တိန်နာ", ကွန်တိန်နာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်နားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
ကိုးကား HPE (Hewlett Packard လုပ်ငန်း) ၏တရားဝင်စာမျက်နှာ ဒီနည်းပညာအကြောင်းပြောထားတာက၊
"Application Containers များသည်ပေါ့ပါးပြီး run-time ပတ် ၀ န်းကျင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် applications များ၊ ဖိုင်များ၊ variable များနှင့်၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်စာကြည့်တိုက်များဖြင့်သူတို့၏သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။".
"သမားရိုးကျ Virtual Machines (VMs) များသည်ကွန်ပျူတာအခြေခံအဆောက်အအုံများကို Virtualization ခွင့်ပြုသည်။ Virtual Machines နှင့်မတူဘဲကွန်တိန်နာများသည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်များကိုထောက်ပံ့မည့်အစားသူတို့၏အိမ်ရှင်၏ Operating System (OS) ကိုအသုံးပြုသည်".
Docker: DEBIAN 10 (Buster) တွင်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
က။ အဆင့် ၁
ပြင်ဆင်ပါ operating system တပ်ဆင်ဘို့။
sudo apt update && sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
ခ။ အဆင့် ၂
သော့ကိုကူးယူပါ တရားဝင် repository ကို၊ တရားဝင် Repository ကိုပြုပြင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဗားရှင်းနှင့်၎င်းမှရရှိနိုင်သောဖိုင်များကိုအတည်ပြုပါ GNU / Linux Distro။ ငါတို့ကိစ္စအတွက် DEBIAN 10 (Buster) သို့မဟုတ်အခြား GNU / Linux Distro၊ အလားတူသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပေါ်အခြေခံပြီး MX Linux ကို 19.
sudo apt update && apt-cache policy docker-ce
C. အဆင့် ၃
လျှောက်လွှာကို install နှင့်လိုအပ်သောဖိုင်များအကြံပြုခဲ့သည်။
Step အဆင့် ၄
ခေါ်သည့်စမ်းသပ်မှုကွန်တိန်နာ၏တပ်ဆင်ခြင်းကို run ခြင်း, application ကို install လုပ်ပါ မင်္ဂလာပါကမ္ဘာလောက.
E. အဆင့် ၅
ထည့်သွင်းထားသော application ၏ဗားရှင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
G. အဆင့် ၇
၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအခြားခြေလှမ်းကိုလည်း optional အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည် "အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမဟုတ်သူအသုံးပြုသူ" ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲကွန်တိန်နာကို run နိုင်ပါတယ် "စီမံခန့်ခွဲသူ"။ ဤဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုအတွက်လက်ရှိအသုံးပြုသူအားခွင့်ပြုလိမ့်မည် "Sysadmin".
sudo adduser sysadmin docker
H. အဆင့် ၈
နောက်ဆုံးတော့လုံးဝအသုံးမပြုခင်စံပြအရာ Docker, ဝန်ဆောင်မှု၏ start နှင့်စမ်းသပ်မှုကွန်တိန်နာ၏ကွပ်မျက် restart နှင့် validate ရန်ဖြစ်ပါသည်။
sudo /etc/init.d/docker status
နောက်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောနည်းပညာသို့မဟုတ်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားထုတ်ဝေမှုတစ်ခုတွင်၎င်းကိုဆက်လက်ကျွမ်းကျင်ရန်ဆက်လက်လေ့လာရန်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စနစ်တပ်ဆင်ခြင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုသင်ကြားလိုခြင်းသို့မဟုတ်သိလိုစိတ်ပြင်းပြမှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုပါဝင်သောအလွန်ကောင်းသောလက်စွဲစာအုပ်ရှိသည် DEBIAN GNU / Linux 9/10 တွင်တပ်ဆင်ခြင်း ၏စာရွက်စာတမ်းများအပိုင်း၌တည်၏ docker တရားဝင် site ကို.
နောက်ဆုံးသင်အနည်းငယ်သိလိုလျှင် Docker၊ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ စစ်မှန်သောဘဝတွင်မည်သို့အသုံးပြုသည်၊ အောက်ပါလင့် ၂ ခုကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။ RedHat y AWS အမေဇုံ.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဒီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ app အကြောင်းနှင့် «Tecnología de Virtualización basada en Contenedores» ခေါ်ဆိုခ «Docker»၎င်းသည်ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်သော application virtualization abstraction နှင့် automation ကိုထောက်ပံ့သည် လည်ပတ်မှုစနစ်များ; အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Docker: DEBIAN 10 တွင်နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Facebook မှ Slab memory controller ကိုတိုးတက်စေသည့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်
Rebuilderd - Arch Linux အတွက်သီးခြားလွတ်လပ်သော Binary Package Verification System